कक्षा ११ को नतिजा सोमबार – Famous Nepal
05:55: PM Thursday October 18, 2018
Posted on December 3, 2017 at 3:06 pm by फ्यामोस नेपाल
भक्तपुर – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार कक्षा ११ को आँशिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । परीक्षा भएको ६ महिना सम्म पनि कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको भनेर आलोचना भईरहेका बेला बोर्डले आँशिकको नतिजा सार्वजनिक गरेर अपजस मेटाउने कोशिस गरेको हो ।
‘हामी परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं, चाँडै नै सार्वजनिक गर्छौ’ बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक डम्बर कुमार बतासले भने ।
एमालेबाट प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्री को ? किरण र पृथ्वीसुब्बामध्ये आज एक छानिने
Posted by फ्यामोस नेपाल - February 11, 2018 0
काठमाडौं । प्रदेशस्तरीय संसदीय दलको नेता छान्न नेकपा एमालेले आज प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । पहिला सहमति खोजिने…
लगेज फुटाएर चोर्दाचोर्दै त्रिभुवन विमानस्थलमा ३ जना कर्मचारी रंगेहात पक्राउ !!
कार्तिक ३०, काठमाडौं– यात्रुको लगेज चोरी गर्दागर्दै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन कर्मचारीहरु रंगेहात पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी विमानस्थल सुरक्षा…
पहिलो चरणको निर्वाचनअगावै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रक्षेपण गरेको एक निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । रिपोटर्स नेपालका अनुसार रिपोर्टमा एमाले सबैभन्दा…